Madaxweynaha Soomaaliya oo caawa war culus ku dhawaaqay. – Radio Daljir
Madaxweynaha Soomaaliya oo caawa war culus ku dhawaaqay.
Seteembar 21, 2016 10:46 b 0
“Dhowrista habraaca doorashada waxaa sal u noqonaya in la xurmeeyo hannaan kasta oo sax ah oo doorashada lagu suuragelinayo. Musharixiinta xuquuqdooda waxaa ka mid ah inay si nabad ah u qabtaan ololahooda iyo barnaamijyadooda siyaasadeed ee doorashada. Dimoqraadiyadda iyo xorriyatul qowlka mas’uuliyadda ku saleysan ayaa na faraya in musharixiinta ay noqdaan kuwo si hufan, waddaniyad leh u soo bandhigaan barnaamijyadooda siyaasadeed iyagoo qiimeynaya duruufaha dalku ku jiro iyo baahida loo qabo dar-dargelinta dib u heshiisiinta iyo dib u soo celinta kalsoonida shacabka ka dhexeysa’’.
DHEGEYSO-Warkii fiidnimo ee Daljir iyo Weriye Cabdullaahi Yare.